Weerar Doon looga qabsaday ciidamada dowladda oo ka dhacay Badda gunteeda.
Dowladda Qadar oo cambaaraysay qaraxii lagu dhaawacay Afhayeenka DFS. Qaraxyo hurdada ka toosiyay malaayiin qof oo Iiraan ka dhacay. Sarkaal katirsanaa melleteriga Kenya oo ku dhintay weerar ka dhacay Koonfurta Soomaaliya. Khilaafka ka soo cusboonaadey doorashooyinka Maamulka 'Somaliland'. Qarax ka dhacay Muqdisho iyo Al Shabaab oo ka hadlay. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo si dirqi ah uga badbaaday isku day dil. Saldhigga ciidanka Itoobiya ee degmada Xudur oo weerar culus la kulmay. Kumuu ahaa dagaalyahankii fuliyay weerarkii agagaarka Afisyooni ee lagu beegsaday saraakiisha Caddaanka? [Dhageyso]. Ruux Muslim ah oo weerar Kaligii duulnimo ku qaaday Macbadka Yahuudda ee gobolka Texas. Xoogaga Jihaadi ah oo la wareegay deegaan katirsan gobolka Galguduud. Guddiga doorashooyinka DF oo doortay guddoon cusub. 6 sano oo kasoo wareegtay dagaalkii Ceel-Cadde ee lagu laayay ciidamada Kenya [Warbixin].
Thursday December 02, 2021 - 17:47:10
Xoogag jihaadi ah ayaa weeraro safballaaran ah ku qaaday ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka la shaqeeya ee ku sugan deegaanno katirsan gobolka Sh/hoose ee Koonfurta Soomaaliya.
Dagaalyahanno aad u hubaysan ayaa maanta duhurkii weerar badgal ah u dhigay maleeshiyaadka DF-ka oo ku socdaalayay gudaha badda gaar ahaan agagaarka xeebta deegaanka Dhanaane oo ah deegaan u dhaxeeya magaalooyinka Marka iyo Muqdisho.
Gudaha badda waxaa ka dhacay dagaal culus oo in mudda ah socday, warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in ciidamada DF-ka oo ka yimid dhanka xeebta Marka ay gudaha badda uga carareen Doon waxaana gacanta ku dhigay ciidamada Al Shabaab.
Dhanka kale inta u dhaxaysa deegaannada Shalambood iyo golweyn ee duleedyada degmooyinka Buula Mareer iyo Marka waxaa weerar jidgal ah loogu dhigay maleeshiyaad DF-ka waxaana laga dhaawacay hal askari.
Isla gobolka Shabeelada hoose maanta barqadii ciidamada Al Shabaab ayaa inta u dhaxaysa degmada Jannaale iyo deegaanka Buufow waxay kamiin ugu dhigeen maleeshiyaad kale waxaana weerarkaas dhabba galka ah lagu dilay hal askari ohalka mid kale uu dhaawac kasoo gaaray.
Gobolka Sh/hoose ayaa kamid ah meelaha ay ka socdaan weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye ee dalka Soomaaliya kusoo duulay iyo maleeshiyaadka la shaqeeya.
Dowladda Qadar oo cambaaraysay qaraxii lagu dhaawacay Afhayeenka DFS.
Qaraxyo hurdada ka toosiyay malaayiin qof oo Iiraan ka dhacay.
Sarkaal katirsanaa melleteriga Kenya oo ku dhintay weerar ka dhacay Koonfurta Soomaaliya.
Qarax ka dhacay Muqdisho iyo Al Shabaab oo ka hadlay.
Saldhigga ciidanka Itoobiya ee degmada Xudur oo weerar culus la kulmay.
AMISOM Oo Madaafiic Khasaara Dhalisay Ku Garaacday Xaafado Katirsan Degmada Yaaqshiid,Muqdisho.
Jeneraal Katirsan Dowladda Shiicada Iiraan Oo Lagu Dilay Wadanka Suuriya.
Sawirro:Horumar Dhan Walba Oo Kajira Magaalada Shadaade Ee Wadanka Suuriya.
Godkii Geelle Mala isku soo galay?!!! W/Q : Suldaan Maxamed Garyare, Abuu C/raxmaan.
Daawo Sawirro:Ciidanka Itoobiya Oo iyagoo Calaamadda Kirishtanka Qoorta Kusita Kusoo Qulqulaya Soomaaliya.
Cabdalla Boos Ex.Wasiirkii G/dhigga "Soomaaliyeey Ogaada Dalka Soomaaliya Gumeysi Ayuu Kujiraa" Daawo+Dhageyso.
Alwalaa Walbaraa waxaa jeedinaya Sheekh Nuur Macalin C/raxmaan.
Cilmiga iyo Culimada waxaa jeedinaya Sheekh Mukhtaar Abuu Zubeyr
الخوراج والغلو في التكفير waxaa Jeedinaya Sheekh Abuu Zubeyr.
الخوراج والغلو في التكفير
Ladagaallama kuwa soo duulay waxaa jeedinaya Sheekh Fu'aad.
waa kalimad boorin ah
Tarbiyada Carruurta waxaa jeedinaya Sheekh Xasaan Xuseen.
waxaa muxaadaro ku saabsan xanaanada Carruurta
dhagaraha sheydaanka waxaa jeedinaya Sheekh Xasaan Xuseen
Sheydaanka iyo dhibaatadiis
Muxaadaro: Dhaxalka Islaamka waxaa jeedinayay Sheekh Abuu Zubeyr.
waa muxaadaro cajiib ah
Muxaadaro: Geediga loogu jiro daarta Aakhiro ~ Sheikh Cabdirashiid Sheikh Cali Suufi
waa muxaadaro ka hadlaysa Jannada iyo Naarta
Muxaadaro: Awooda Alle nasiiyey ee aan dayacnay Sh.Mustafa Xaaji Ismaaciil.
waa muxaadaro qiima badan
Muxaadaro: Dacfiga Iimaanka waxaa jeedinaya Sheekh Nuur Macallin C/raxmaan.
Sheekh Nuur Macallim
Copyright © 2021 - 2022 Somali Memo Media Network All Rights Reserved.
Website Designed by Toolmoon Media